Ramamimampionona Gérard : “Sehatry ny fifampitokisana ny fifidianana” | NewsMada
Nitondra ny heviny momba ny resaka fifidianana ny eo anivon’ny CFM, amin’ny alalan’ny filoha lefitra eto amin’ny faritanin’Antananarivo. Ilaina ny fifanabeazana araka ny nambarany.
“Anisan’ny sehatra iray isian’ny fifampitokisana ny fifidianana. Any dia efa ampianarina ny olona hoe fifampitokisana ange no dikan’ny hoe omena olona iray ny vaton’ny tena amin’ny fifidianana. Tokony hahatoky izay olona omena vato ny tena, ary tsy mivadi-pitokisana izay omena fahatokisana izay. Anisan’ny ibeazana izany rehetra izany” , hoy ny filoha lefitry ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, amin’izao mbola isian’ny fitarainana etsy sy eroa ny amin’ny fizarana fanampiana ny vahoaka eny ifotony izao.
Mahatonga korontana ny tsy fifampitokisana
Ny tsy fifampitokisana no mahatonga ny fikorontanana, fihazakazahana sao tsy mahazo fanampiana na misy lazaina na ahina fa mangalatra na manodinkodina izany.
“Lasa mifanitsy isika amin’izany“, hoy izy. Anisan’ny fahavalon’ny fiarahamonina ny tsy fifampitokisana. Tokony hibeazana sy hiainana izay. Toe-tsaina io, toe-po. Saingy tsy maintsy ampianarina sy atao hita ary fomba fiasa, fomba fihetsika, fomba fiteny…
Ilaina hatrany ny fanabeazana
Tao anatin’izay 60 taona niverenan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara izay, mila fanabeazana be dia be isika. Tsy ny ankizy kely na mpianatra no resahina amin’izany fa isika isan’ambaratonga sy isan-tsehatra: mibe isan’andro. Tsy mahamenatra izany. Na fomba fiasa, na fiteny, na fifandraisana, na fihetsika… Mba hisian’izay fifampitokisana sy fifampihenoana ary fifamenoana izay.